Fitsapana sy fisedrana
Fanirian'ity zazalahy kely iray ny mba ahita izany fivoaran'ny akorandandin-tsamona izany ka naka iray izy ary nandinika akaiky ny zavatra niseho. Rehefa tonga ary ny fotoana izay hivoahan'ity samona ao anatin'ny akorany dia tazan'ilay zazalahy fa sahirana mafy dia mafy izy. Tsy naharitra razazalahy ka nandrovitra ity akorandandy hanampy ilay samona. Tafavoaka soamantsara ity lolo saingy tazany fa mbola miraikitra amin'ny vatany ny elany. Midika izany fa nisy zavatra tsy tomombana tao. Ny zavatra tsy fantatry ity zazalahikely ity kay dia ny hoe ilain'ilay lolo samirery ny miaritra izany fahasahiranany izany mba hampitombo ny hozatra rehetra ahafahan'ny vatany ho àry soamantsara.
Noho ny tsy fahalalany anefa dia nanampy ilay lolo tamin'ny tolona izay nataony ilay zazalahy ka nanimba ny hoavin'ity zava-boahary ity. Kanefa dia tena nilaina teo amin'ny fitomboany ny fivoahany samirery tao anaty akora mba hampatanjaka azy tsara.
Toy izany koa isika olombelona, ilaintsika eo amin'ny fiainantsika ny mizaka ireo olana maro isankarazany na fizahantoetra mba hampatanjaka antsika amin'ny finoana. Izany no mahatonga an'Andriamanitra Ray tsy miditra an-tsehatra avy hatrany raha fantany fa mbola ho vitantsika samirery ny hiatrika izany ady izany ka hivoaka mpandresy eo amin'ny fisedrana iray izay miseho. Tsarovy anefa fa eo anilantsika mandrakariva io Andriamanitra be fitiavana io hankahery sy hanampy antsika raha miresaka aminy amin'ny fotoana rehetra isika.
Hoy ny teny fikasana ao amin'ny Baiboly : "Ary Jehovah hitari-dalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karankaina aza sy hampahatanjaka ny taolanao; dia ho tahaka ny saha vonton-drano ianao sy ho tahaka ny loharanao miboiboika izay tsy mety ritra." Isa.58:11.
Crée le mercredi 01 août 2018 à 13:58:22
Ilay Mpisolo vaika
Indray andro dia nisy trano may tao amin\_'ny tanàna iray. Injao nisy antsoantso re tao anatin\_'ilay trano may, indro zazala[. . .]
Ny Diakona sy ny Loholona
I. Ny atao hoe Diakona sy Loholona 1.1 Araka ny soratra Masina Ary ny roa ambin’ny folo lahy nampiangona ny mpianatra rehe[. . .]
RAZAFINDRAMANITRA Nestor, Mpitandrina